11 Shabakadaha Bulshada Cusub ee 2022 | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/11 Shabakadaha Cusub ee Bulshada ee 2022
11 Shabakadaha Cusub ee Bulshada ee 2022
Halkan waxaa ah liis cusub oo shabakadaha bulshada ee soo ifbaxaya si loo sahamiyo 2022. Waxaa jira shabakado horumarinta xidhiidhada xirfadeed, fariimaha wakhtiga dhabta ah, wadaaga khibradaha maqalka, iyo sahaminta xaqiiqada la kordhiyay. Dhawr ka mid ah shabakadahan ayaa bixiya deegaan xayeysiis la'aan ah oo leh sir la xoojiyey.
Octi waa shabakad bulsho oo cusub oo adeegsata xaqiiqada la kordhiyay si ay dadka ugu xidho nolosha dhabta ah. Xubnuhu waxay samayn karaan fiidiyowyo leh walxo iyo muuqaal waxayna kasban karaan qadaadiicda Octi ee dhijitaalka ah iyadoo dad badani ku hawlan yihiin. Octi waxaa taageeray Live Nation, shirkadda madadaalada caalamiga ah.
Clubhouse waa barnaamij maqal bulsho oo caan ah halkaas oo isticmaalayaashu ay ku martigelin karaan doodaha mawduuc kasta. Mawduucyada waxay soo baxaan waqtiga dhabta ah. Naadiga Clubhouse, ka qaybgalayaashu way fadhiisan karaan oo dhegaysan karaan, gacantooda kor ayay u taagi karaan si ay u qayilaan, ama u martigeliyaan qolalkooda. Asal ahaan abka iOS iyo martiqaad-kaliya, 2021 Clubhouse wuxuu bilaabay abka Android oo ugu dambayntii ka soo baxay beta, oo u furan dhammaan.
CloutHub waa shabakad bulsho oo bilaa xayeysiis ah oo loogu talagalay xoojinta bulshada, bulshada, iyo siyaasadda iyo ka qaybgalka. Ka qaybqaado doodaha iyo doodaha caqliga leh. Arag oo wadaag macluumaadka Ku biir kooxaha Hel warar cusub oo hel ilaha qiimaha leh. Tillaabo qaado si aad wax uga qabato dhibaatooyinka kugu saameeya.
Boosyadu waa balaadhinta cusub ee Twitterka ee beddelka maqalka tooska ah. Twitter hadda waxa ay siisaa awoodda ay ku martigeliso Meel bannaan dhammaan xisaabaadka leh 600 ama ka badan oo raacsan. Goobuhu waxa loogu talagalay wada-hadallo yaryar, wada-hadallo ama doodo waaweyn oo lala yeesho kumanaan dhegaystayaal ah. Ku biirista meel bannaan waxay u ogolaataa dhagaystayaashu inay ka falceliyaan emojis, fiiri tweet-yada dhejiska ah, raacaan qoraallo, tweet-ka ama fariin toos ah goobta, ama codsadaan inay hadlaan.
HalloApp waa shabakad bulsho oo cusub oo qoyska, asxaabta, iyo asxaabta. Shabakadu waa bilaa xayeysiis mana ururiso mana isticmaasho wax macluumaad gaar ah Nambarka taleefanka ayaa isku xira xubnaha. Sheekooyinka dhamaadka-ilaa-dhamaadka waa la sireeyay - qof kale ma akhriyi karo, xitaa shaqaalaha HalloApp.
Polywork waa shabakad bulsheed oo xirfad leh oo ku jirta martiqaad-kaliya beta ee isticmaalayaashu si ay u abuuraan bog shakhsiyeed oo bilaash ah, wadaagaan waxa ay ku jiraan (shaqsi ahaan iyo xirfad ahaanba), oo ay u diraan codsiyada iskaashiga kuwa kale. Polywork waxaa lagu aasaasay fikradda ah in dadku ay ka badan yihiin calaamadaha ay bulshadu ku dhejisay, sida jagooyinka shaqada iyo dugsiyada ay wax ka baran jireen.
Yubo waa madal bulsho si toos ah uga socota oo lagu bartilmaameedsado Gen Z (ie, ka yar da'da 30). Bilow wada sheekaysi muuqaal toos ah ilaa 10 saaxiib oo xitaa ku casuun kuwa kale inay ku soo biiraan. Ku dhufo si aad u heshid dad isku fikrad ah, oo soo arag bulshooyinka. Yubo waxa uu soo maray dhawr soo noqnoqosho, laakiin shabakada bulshada ee Faransiiska ayaa caan ka heshay sannadkii la soo dhaafay iyada oo ay ugu wacan tahay is-dhexgalka la xoojiyey ee Snapchat iyo YouTube.
Poparazzi waa app wadaaga sawir halkaas oo xubnuhu ay abuuraan muuqaallo bulsho. Xubnuhu waxay helayaan ogeysiis marka taageeruhu uu sawir ka qaado iyaga, xubnuhuna waxay si buuxda u maamulayaan inay sawir kasta ka saaraan profile-kooda. Kaliya taageerayaasha xubnaha ayaa si toos ah ugu dhejin kara profile-ka. Dhammaan sawirada kale waxay ka muuqdaan profile kaliya ka dib markii xubnaha ay ansixiyaan.
Honk waa abka fariimaha-waqtiga-dhabta ah ee cusub. Ma jiro taariikh sheeko ama badhanka dir Isticmaalayaashu waxay arkaan fariin kasta oo la qoray wakhtiga dhabta ah, iyaddoo hakadyada iyo shucuurtu ay caadiyan tebeen.
MeWe waa shabakad bulsheed oo aan xayaysiis lahayn oo si gaar ah loogu dhisay naqshadeeda asaasiga ah. Isticmaalayaashu waxay leeyihiin nuxurkooda, xakameeyaan isdhexgalka, oo naqshadeeyaan sirtooda. MeWe ma la wadaagno ama ka iibinno macluumaadka xayaysiiyayaasha ama suuqleyda, mana jirto bartilmaameed. MeWe waxay bilawday 2016, laakiin waxaa dhawaanahan lagu arkay faa'iidooyin waaweyn xubnaha sababtoo ah diiradda ay saartay sirta iyo sifooyin cusub sida fiidiyowyada laba-camera iyo MeWe Stories.
Quest waa app ka kooban qaniinyada talo-xirfadeed. Waa hab ay taageerayaashu u dhagaystaan ​​khubarada iyaga oo aan kala shaandheynin podcast oo dhan. Khubaraduna waxay wadaagaan aqoonta iyaga oo aan u baahnayn in ay qoraan boostada blog.
Xarunta Ganacsiga Google ayaa hadda si toos ah u soo bandhigaysa u-qalmitaanka calaamada alaabta